Quraac Talyaani ah oo caadi ah Rome | Safarka Absolut
Quraac Talyaani ah oo caadi ah Rome
maruuzen | | La cusboonaysiiyay 17/06/2021 23:09 | Roma
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda iyo xiisaha badan Yurub waa Rome. Wuxuu isku daraa wax kasta oo yar, inta udhaxeysa taariikhda, farshaxanka iyo caloosha. Qof kasta oo socotada ahi wuu ku raaxeeyaa qorrax ka soo baxa ilaa habeen dambe, markaa waa inaad maalinta ku bilowdaa quraac wanaagsan, a quraac caadiga ah ee Rome.
Waan jeclahay quraacda, wax badan oo ka mid ah markaan safrayo waxayna metelaan siyaadada tamarta lagama maarmaanka ah si ay u bilaabaan maalinta, fursadda dhadhaminta dhadhanka maxalliga ah, inaan dareemo qayb yar oo ka mid ah meeshaas aan ogaanayo. Laakiin maxaan ku quraacan karnaa Rome?
1 Quraacda rooma
2 Xagee laga quraacdaa Rome
Cunnooyinka oo dhami waxay muhiim ka yihiin Talyaaniga, oo ah dal leh cunno cunno fiican, markaa aan ka faa'iideysanno fursadda aan ku bilaabi karno maalinta quraac wanaagsan. Sida iska cad, halyeeyga aan waligiis la waayin waa kafeega waxaana ku jira liiska ugu caansan uguna caansan dhammaantiis waxaa jira keeg. Kadib, quraacda caadiga ah ee fudud ee Rome waa kafeega iyo keega xoogaa subag ama jaam ah, qaar biscuit ama buskud.
Waxaad ka heli doontaa menu-kan guryaha Rome ama supermarket-ka, laakiin Ku quraacashada banaanka, baarka, waa nooc kale oo khibrad ah.
Haddii aad raadineyso wax ka duwan, ka dib maalin maalmaha ka mid ah waa inaad ka booddaa quraacda hudheelka oo aad u baxdaa oo aad raadisaa quraac Roman ka sii faahfaahsan. Halkan waxaan mar hore ka hadlaynaa kafee iyo wax macaan oo la socda: bomba, ciambella, maritozzo ama cornetto.
Aynu ku bilowno kafeega. Talyaanigu way jecel yihiin kafeega sidaas oo kale annaguna sidaas ayaan sameyneynaa, sidaa darteed quraacda xulashooyinka ugu caamsan waa kafee madow, kafee, qaxwo leh caano, kafeega lungo, kafeega freddo, caffe al vetro ... waa hagaag, waxaa jira qaamuus dhan sidaa darteed aan wax yar ka fududeyno. Ujeeddada:
Qaxwada: waa espresso fudud. Waxay ku timaaddaa koob, tiro yar oo aad u urursan. Waad ku dari kartaa xoogaa caano ah ama sonkor ah.
Qaxwada Macchiato: waa kafee leh dhibic caano kulul.
Cappuccino: kafee leh caano la dubay oo la kariyey, aad u kareemo badan.
latte macchiato: galaas dheer oo caano kulul oo leh kafee espresso.
Kafee Lungo: Waxaa lagu qaadaa koob espresso waana taas waxa ay ku saabsan tahay, waa espresso biyo yar oo kulul ka yar.
Dhammaan noocyadan kafeega Talyaaniga waxaa lagu sameeyay halbeegga: the kafee espresso. Haddii aadan jeclayn, waxaad had iyo jeer ka dalban kartaa Americano ku dhex jira koob weyn, kaas oo ka biyo badan.
Taasi marka loo eego kafeega, hadda waa fiican tahay, xaga macmacaanka waxaan haysanaa dhawr ikhtiyaar. Mid waa maritozzi, rooti khamiir macaan taas oo ah takhasuska Rome. Halyeeygu wuxuu leeyahay in qarniyadii dhexe march 1 maritozzo la siiyay qof jecel, iyo in lagu qariyay kareemka waa inay jirtaa jawharad ama giraan.
Waa bun weyn laakiin aad ufudud badan waxaana badanaa laga buuxiyaa kareem la kariyay. Aad u culus? Waxay la socotaa kafee waadna la wadaagi kartaa, fikradda markasta waa in la isku dayo. Waxaa jira maritozzi aad u fiican oo ku yaal Il Maritozzaro, Roscioli Caffe ama Pasticceria Regoli. Farxad!
Quraac kale oo caan ah oo quraac ah ayaa ah kornetto. Xaqiiqdii, quraacda caadiga ah ee Talyaanigu waa kafee kafee cappucino oo leh kornetto.
Inaadeer nacas Frances Buunshadan waxaa badanaa lagu sameeyaa saliid halkii subagga laga heli lahaa, sidaa darteed waxay leeyihiin dhadhan fudud oo dhadhan macaan. Cornetto ayaa imaan kara "Fudud" ama la buuxiyey leh saxmad, macaanka, ama kareem. Waxaa jira ikhtiyaarro caafimaad leh, haddii ay kugu culus yihiin adiga, ka dibna waxaa jira cornettos muhiim ah, waxaa loola jeedaa, oo lagu sameeyay bur bur ah oo malab laga buuxiyay.
Xagee ka cuntaa geedaha ugu fiican? Waa hagaag tahay waad fadhiisan kartaa si aad u cabto kafeega oo aad ugu dhex cuntid cornettos Caffe Parchment, Pizza del Risorgimento, ama meesha Pasticeria Barberini, xaafadda Testaccio, ama hortiisa meeshan, gudaha Bakhaarka taraamka Haddii aadan rabin qaxwada markaa rootiga ugu fiican Rome waa Panificio Bonci, gudaha Prati.
Haddii quraacda Roomaanku ay leedahay wax u eg croissant, oo ay ka tagto Faransiiska oo ku qanacsan, waxay sidoo kale leedahay wax la mid ah donut oo soo jiidata Mareykanka. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa ku saabsan ciambella.
Sida donut, waa a cajiinka la shiilay oo leh sokor lagu maydho marka markaad wax ka qaniinto, xoogaa way ku jajabisaa oo afkaaga ayaa nacnac ka buuxsamaya. Ciambellas-ka ugu fiican waxaa lagu iibiyaa Linari, Vía Nicola Zabaglia, 9.
Roodhida kale ee caadiga ah ee rootida Roman-ka ee quraacdu waa bambolone, ama bambo, bun yar oo la shiilay oo midab khafiif ah laga buuxiyay.
Dalabku wuxuu ku sii socdaa rootiyada kale ee caadiga ah ee lagu iibiyo makhaayadaha qaarkood oo ay ku jiraan keega. Tusaale ahaan, bartamaha Rome meeshan oo kale waa Roscioli Caffe, oo ku taal inta udhaxeysa Ghetto-ka Yuhuudda iyo Campo de'Fiori. In kasta oo ay tahay meel qaali ah in quraac laga quraaco maalin uun, waad sameyn kartaa oo waxaad ku raaxeysan kartaa tayada dheenishka ama crostata, keegga macaan ee ay ku jiraan tufaaxa iyo yicibta oo macaan.
Ilaa hadda macaan, ma aha? Marka hadaad ka mid tahay kuwa raba wax cusbo leh waxaad ku raaci kartaa qaxwada leh a tramezzini. Kuwani waa saddexagal rooti cad oo leh jajab iyo majones leh buuxin kala duwan. Iyagu heshiis weyn ma ahan. Dabcan, waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican. Haddii aad u safartay Japan oo aad ku soo laabatay adigoo ku faraxsan nooca noocan ah, kuwa Rome xoogaa way kaa niyad jabi doonaan. Maskaxda ku hay.
Ugu dambeyntiina waad awoodaa isku dar macaan iyo cusbo a caadiga ah brunch, quraac goor dambe ah ama qadada hore. Waa maxay caado Mareykanku adduunka ku maray!
Xagee laga quraacdaa Rome
Sida iska cad, burush ma aha quraacdaada caadiga ah ee Rome laakiin waa caado caan noqotay oo magaalada lagu dhex daro quraacdeeda ugu caansan. Marka, marka lagu daro boggaga aan magacawnay, tilmaan kuwa kale:
Marigold Rome, Via Giovanni da Empoli, 37) ayaa ah ikhtiyaarka koowaad. Waa makhaayad leh rooti yar oo sameeya rootiga guriga lagu sameeyo, duubyada qorfe, yogurtka dabiiciga ah, granola, canjeelada, ukumo iyo waxyaabo kaloo badan. Ku dar qaxwaha qaaska ah iyo liis dheer oo qani ah oo shaah ah waxaadna leedahay brunch fiican.
Caffe Merenda: Waa meel caan ka ah dadka Roomanka dhexdeeda, khabiirro ku takhasusay qalliinka oo leh buuxinta bistoolada. Biriishku sidoo kale wuu fiican yahay oo cajiintiisa oo dhan ayaa taagan. Waxay ku taal Via Luigi Magrini, 6.
Caanood: ku jira mowjadda cuntada caafimaadka leh. Waa makhaayad sidoo kale u adeegta quraacda: waxaa jira macaano, canjeelo, ukumo iyo ham, cornettos iyo kafee. Via Borgognona, 43-46.
Nero Vaniglia: wuxuu furmaa goor hore, nooca 6 subaxnimo. Waxay leedahay qaab casri ah oo jikada oo dhami indhaha ku hayso. Wax walba waa macmal ah oo ugu fiican yihiin cute leh mousas dhadhan kala duwan. Waxay u dhaxeysaa Ostiense iyo Garbatella, Circonvallazione Ostiense, 201.
Coromandel: Waxay u dhowdahay Piazza Navonna waxayna u adeegtaa keega macaan ee adduunka oo idil. Waxay ku taal Via di Monte Giordano 60/61.
Matoo: halkan waxaad ku dhadhamin doontaa sida ugu fiican xasaasiyad ka yimid Rome. Waxay ka mid yihiin quraac Puglia caadiga ah waxayna ku jiraan liiska silsiladdan raashinka oo saddex laamood ku leh Rome. Mid wuxuu ku yaal Piazza Bologna, midna wuxuu ku yaal Sallustiano midna wuxuu ku yaal Quarter-ka Afrika. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa panzerotti dhadhan fiican leh iyo focaccias. Via Lorenzo il Magnífico, 26, Via Venti Settembre, 41 iyo Viale Eritrea, 108.
Bar Benaco: meeshan waa mid weyn, fudud oo dhadhan fiican leh. Had iyo jeer way soo noqnoqotaa oo waxa ugu fiican ee ay qabataa waa croissants. Waxay ku taal Vía benaco, 13.
Caffe delle Comari: waxaad dooran kartaa inaad ku fariisato baarka ama miiska. Kaladuwanaanta kaladuwan way fiican yihiin shaqaalahooduna aad ayay u feejigan yihiin. Waxay u dhowdahay Vatican-ka sidaa darteed waa meel fiican haddii aad bilowdo socdaalkaaga xaafadda kadib. Vía Santamaura, 22. Waxay furan tahay Isniinta ilaa Axadda 7 subaxnimo ilaa 9 fiidnimo.
Cafe Novecento: Waxay leedahay qol shaah oo fiican iyo Roomaan fara badan oo lagu sheekeysto.Waxay u adeegtaa quraac ilaa duhurkii. Via del Governo Vecchio, 12 jir.
LI.BE.RA + ugu dhakhsaha badan: Kani waa makhaayad goor hore furan oo bixisa quraac, qado, iyo saacad faraxsan. Waxay u dhowdahay Pizza Navona waana qabow badan. Waxay ku taal Via del Teatro Pace, 41.
Saint Eustachio il Caffè: waa hareeraha pantheon-ka waxaana loo yaqaanaa heer sare kafee kafeega dhulka. Pizza di S. Eustachio, 82. laga bilaabo 7:30 subaxnimo.
Kuwani waa qaar ka mid ah xulashooyinka lagu raaxaysan karo a quraac Talyaani caadi ah Rome, laakiin kuuma oggolaan doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Quraac Talyaani ah oo caadi ah Rome
Waan jeclahay boggan.
Ku jawaab melany
Waa qalad in loo maleeyo in panino oo aan ahayn panini, oo noqon laheyd jamac, ay qeyb ka tahay quraacda. Quraacda Talyaaniga waxay leedahay waxyaabo macaan oo keliya, wax cusbo leh. Panino waxaa loo iibiyaa wakhti kasta kuwa horey u quraacday saacado badan oo gaajaysan sida subaxa hore.
dhoola cadeyn si aad u mahad celiso dijo
Guriga dhexdiisa, ismaandhaafka ayaa u badan inuu dhaco
jahwareer waana sababta IKEA u soo bandhigto Emoticons, qalab
isgaarsiinta si loo hubiyo fahamka guriga.
Ku saabsan Android, waxaa la filayaa in cusbooneysiinta mustaqbalka ay sameyn doonto
geli si sax ah isla qaabka soo-bandhigga. , Faransiiska,
Jarmalka, Talyaaniga, Qeybta hoose ee kiiboodhka, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto mawduucyo emoji kala duwan
dooro. Calaamadda saacadda ee ku taal dhinaca bidix ayaa ku tusaysa wixii ugu dambeeyay
inaad isticmaashay. Sidoo kale waa la heli karaa toos, 30
Qaamuusyada luqadaha ugu muhiimsan, On my teebabka taleefankayga gacanta (Menu - Settings - Luqad iyo Keyboard) halkaas oo kaliya
karti u yeelo in dalabkii aan soo dejiyey isagana la isticmaalay iyo voila, way ii shaqaysay
si kaamil ahaansho.
Kajawaab emoticons si aad ugu mahad celiso
Cashada Kirismaska ​​ee Cuba
Luqadaha ugu muhiimsan ee Hindiya